Malunga nathi-Ushishino lweWanhe kunye noRhwebo Co, Ltd.
I-Wanhe Grass luphawu lobuchwephesha oluphezulu lwe-Intanethi oludibanisa i-R & D, imveliso kunye nentengiso kwaye uzibophelele ekubeni ngumboneleli ngenkonzo ebalaseleyo kunye nokwenziwa kwicandelo lengca eyenziweyo.
I-Huai'an Wanhe Industry and Trade Co., Ltd. iseBhankini yaseBeijing-Hangzhou Grand Canal eneendawo ezintle. Yidolophu yaseZhou Enlai, indoda enkulu yesizukulwana, iSixeko saseHuai'an, kwiPhondo laseJiangsu. I-Xinchang Railway kunye ne-Beijing-Shanghai Expressway zidlula esixekweni ngokuhamba ngokufanelekileyo. Ezona mveliso ziphambili yingca yezemidlalo kunye nengca yokwakheka komhlaba kunye nezinye iimveliso ngumzi mveliso wethu. Sisekele ubudlelwane bexesha elide kunye nozinzo lwentsebenziswano nabathengisi abaninzi kunye neearhente kule minyaka ingama-20 idlulileyo Ukuthunyelwa kwamanye amazwe kwabalelwa ngaphezulu kwe-80% yentengiso iyonke.
U-Wanhe unetekhnoloji evuthiweyo kunye nezixhobo zemveliso ezigqibeleleyo
Indawo yokusebenzela nganye ixhotyiswe igumbi lokuhlola inkqubo, izixhobo zovavanyo ezipheleleyo njl njl, izixhobo zayilwa yinjineli yethu okanye ukungenisa kwelinye ilizwe. Zonke iilayini zemveliso zinokwenza ngaphezu kwengca ye-1500 yemitha yengca eyenziweyo yonke imihla. Inganelisa bonke umgangatho wabathengi kunye nobungakanani obufunekayo.
I-Wanhe Grass ihlala ihambelana noMgaqo woPhuhliso lwezeNzululwazi
Itekhnoloji kunye noPhuhliso lweeTalente njengeeNkampani zoPhuhliso lweNjongo
Ukusukela oko yasekwa, uphawu luye lwahlala luhambelana nomgaqo wesayensi wophuhliso, kwaye lwenze uphando lwetekhnoloji kunye nophuhliso kunye noqeqesho lwabasebenzi kwiinjongo zophuhliso lwenkampani. Kumiselwe uphando lobuchwephesha kunye nesebe lophuhliso, kwaye iqela lobuchwephesha le-R & D elinamabanga emfundo aphakamileyo kunye nesakhono esomeleleyo sokuyila. Uhlobo lwentengiso luqwalasele ukugaywa nokulinywa kweetalente, kwaye kugaywa abasebenzi be-R & D bezobugcisa ixesha elide ukuqhubela phambili ukutyebisa iqela le-R & D. Kwangaxeshanye, inkampani iya kuhlala ibonelela ngoqeqesho lobuchwephesha kubantu abakhoyo, kwaye iya kuthi iququzelele ukuqaphela kunye nokufunda kwezinye iinkampani, kwaye iqhubekeke nokuphucula ulwazi lobuchule kunye nokukwazi ukwenza izinto ezintsha kubasebenzi beR & D.
Uhlobo lolo lubaluleke kakhulu kuphando kunye nophuhliso lweemveliso ezintsha. Kunyaka ngamnye, ityale imali eninzi kuphando nasekuphuhliseni iimveliso ezintsha, kwaye iphumelele kakhulu. Phakathi kwazo, kuye kwafunyanwa izatifikethi ezintathu zamalungelo awodwa omenzi wechiza, kwaye iimodeli ezahlukeneyo ziyilelwe iinkalo ezahlukeneyo zesicelo. Kumsebenzi omtsha wophuhliso lwemveliso, uphawu luqinisa ukutshintshiselana kunye nentsebenziswano namaziko ophando lwasekhaya ngokophuhliso lobuchwephesha kunye neemfuno zentengiso, nangokwazisa ngenzululwazi kunye nophuhliso lwentsebenziswano, iziphumo zophando lwezenzululwazi ziguqulwa zayenza imveliso ngokukhawuleza, oko kudala izibonelelo kumashishini .
I-Huai'an Wanhe Industry and Trade Co., Ltd. iseBhankini yaseBeijing-Hangzhou Grand Canal eneendawo ezintle. Yidolophu yaseZhou Enlai, indoda enkulu yesizukulwana, iSixeko saseHuai'an, kwiPhondo laseJiangsu. I-Xinchang Railway kunye ne-Beijing-Shanghai Expressway zidlula esixekweni ngokuhamba ngokufanelekileyo. Ezona mveliso ziphambili yingca yezemidlalo kunye nengca yokwakheka komhlaba kunye nezinye iimveliso ngumzi mveliso wethu. Sisekele ubudlelwane bexesha elide kunye nozinzo lwentsebenziswano kunye nabathengisi abaninzi kunye neearhente kule minyaka ingama-20 idlulileyo Ukuthunyelwa kwamanye amazwe kwabalelwa ngaphezulu kwe-80% yentengiso.Ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabasebenzisi, sikwanikezela ngenkonzo ye-OEM kunye ne-ODM.
Inkampani yethu ivelisa kwaye ithengise zonke iintlobo zemidlalo ekhethekileyo kunye neemveliso zembonakalo yomhlaba, ezizuze udumo kubathengi kwilizwe liphela iminyaka emininzi. Yenza ixabiso kubathengi ngobulumko nangokubila kwethu. "IHarmony yeyona nto ixabisekileyo kwaye isekwe elukholweni" yinkolelo yabo bonke abantu abangamawaka alishumi. Kufuneka sihambelane nomoya weshishini "wokunyaniseka, ubugwenxa, ubuchule kunye nophuhliso" kwaye senze igalelo elingaphezulu kwinjongo yemfundo.
Qho ngonyaka sithatha inxaxheba kwimiboniso emininzi yeli nakwamanye amazwe, ngaxeshanye ndwendwela abathengi kwaye sithethathethane ngamashishini.
Siza kuzisa ezona nkonzo zibalaseleyo ngokwamabango omthengi ngamnye.
Ukuhlangabezana nemfuno yomsebenzisi eyahlukeneyo, i-Wanhe Grass ibonelela ngeenkonzo ezikumgangatho ophezulu ze-OEM / ODM zokuqhubekeka kweenkampani zehlabathi, ezibonakala njengenye yeenkonzo eziphambili zenkampani yophuhliso lwexesha elide. Yonke imfuno ye-OEM / ODM inoxanduva liqela elizinikeleyo lophuhliso lwemveliso kunye nolawulo. Isiqinisekiso kwiimodeli zesiko, iiparameter, iilebheli, iincwadana, ukupakisha, njl, kunye nolawulo lomgangatho ngokuhlolwa komgangatho ngokungqongqo ngokwesicelo sakho. Siya kuzinikela ngentliziyo epheleleyo ngokuhambelana neemfuno zabathengi ukubonelela ngomgangatho wokuqala kunye nenkonzo, sincede ukuba senze uphawu lwakho.
Isithembiso esisibhambathiso: Zonke iimveliso zikhethwe yinjineli yobungcali. Ii-invoyisi ezisesikweni ziqinisekisa ukuthenga nokusebenzisa amalungelo.
Imveliso kunye nokuhanjiswa
Izinto ezithengiweyo kwiwebhusayithi esemthethweni kunye nevenkile yeeflegi zithunyelwa zivela kwindawo yokugcina izinto zenkampani. (Ngaphandle kweemveliso ezizodwa)
Umgangatho: Ukuhambisa ngenqanawa ngomhlaba, umoya kunye nesikhephe (Nceda uphawule ukuba unemfuneko ekhethekileyo)
Ingxelo yasemva kokuthengisa
Ukuqinisekisa ukuba ukulandelwa kwayo yonke imveliso kunye nengxelo kungasombululwa ngexesha, ukufezekisa unxibelelwano olululo kunye nawe, ke kungcono ukubonelela ngenani lesivumelwano elinokuthi lilandelwe kuyo yonke idatha xa kuveliswa.
Ingca yokwakheka komhlaba yokuBekwa komhlaba, Ingca yeGalufa eyenziweyo, Ingca yebhola eTurf, Umhlaba webhola ekhatywayo we-Astro Turf, Ukuxelisa Ikhaphethi Yengca, Ingca eyenziweyo,